नगर बसमा महिला कन्डक्टर – Sourya Online
काशीराम शर्मा २०७६ भदौ २५ गते १३:५० मा प्रकाशित
नगरप्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले भने, ‘हाम्रा दिदी बहिनी कहाँ कम छन् र ? जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाउनका लागि यो काम सुरु गर्दैछौँ ।’ महिला सशक्तीकरणका उक्त काम उदाहरणीय हुने प्रमुख डा. राणाको बुझाइ छ । महिलाले घरको चुलो चौकाको काम सीमित हुनुपर्छ भन्ने कही नलेखेको उनले बताए ।
प्रमुख राणाले भने, ‘अहिले परिचालक नै पछि गएर चालक बन्न सक्छन् । उहाँहरु परफेक्ट भए पछि विस्तारै चालक, परिचालक नै महिला राख्ने हो ।’ उपमहानगरपालिकाले परिचालकका लागि आवेदन माग गरी अन्तर्वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको छ । मधेशी, मुस्लिम, जनजाति महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
‘कुनै बेला आफ्नो गाडीको चालकका रुपमा महिला राखेका थिए । त्यसबेला महिलाले गाडी चलाएको देख्दा अनौठो मानिन्थ्यो’, प्रमुख डा. राणाले भने, ‘अहिले ती बहिनी एउटा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा चालक छन् ।’ महिलालाई अवसर दिने हो भनेजस्तो पनि काम गर्न सक्ने उनले बताए । उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शरद पौडेलले नगर बस सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कार्यविधि तयार भइसकेको छ । बसका टिकट छपाइ पनि सकिएको छ । महिला कण्डक्टर नियुक्तिका लागि लिइएको परीक्षाको नजिता पनि केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । नतिजा आएपछि बस सञ्चालनमा आउँछन् ।’ सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार असोज पहिलो साताभित्रै नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ ।